चिसिँदै सिटौला-थापा सम्बन्ध! « AayoMail
चिसिँदै सिटौला-थापा सम्बन्ध!
2021,2 October, 7:54 pm
काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र गगन थापाबीचको विगतको सुमधुर सम्बन्ध यतिबेला भत्किएको छ।
१३ औं महाधिवेशनमा सिटौला खेमाबाट महामन्त्रीमा चुनाव लडेका थापा १४ औँ महाधिवेशनको संघारमा एकाएक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खेमामा पुगेपछि दुईबीचको गठजोड भत्किएको हो।
बिहीबार नेता सिटौलाले थापालाई ‘स्वार्थी र धोखेबाज’ भनेपछि दुई नेताबीचको दरार सतहमा छताछुल्ल भएको थियो। सिटौलाले थापालाई आफूले मन्त्रीसम्म बनाएको तर सल्लाह नै नगरी पौडेल समूहमा गएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि थापाले औपचारिक रुपमा जवाफ फर्काएका छैनन्।
१३ औं महाधिवेशनमा आफ्नै ससुरा अर्जुननरसिंह केसीसँग महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेर सिटौलालाई दर्बिलो साथ दिएका थापा अहिले भिन्न बाटो रोजेका छन्। उनले सिटौलालाई छोडेका मात्र छैनन्, महामन्त्रीमा घोषणा गरेको दुई चार दिनपछि पौडेल समूहले पार्टी कार्यालय सानेपामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भइदिए।
पौडेल समूहमा थापाको उपस्थितिले बिच्किएका सिटौलाले बिहीबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा लामो दुखेसो गरेको सार्वजनिक भयो।
दुई दिनसम्म मौन बसेका थापाले शनिबार नेता सिटौलालाई पृथक ढंगबाट जवाफ फर्काएका छन् । शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिकामा पार्टी नेतृत्व चयनका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा थापा निलकाजी शाक्यको पक्षमा उभिए। शाक्यलाई नेता प्रकाशमान सिंहको समर्थन छ।
महानगरको चुनावमा थापा नेता सिंहसँगै छन्। पार्टी सभापति देउवाको समर्थनमा महानगरको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका प्रगतिमान रञ्जितलाई नेता सिटौलाको साथ छ। सिटौलाका निकटवर्ती नेता भीमसेनदास प्रधान पनि रञ्जितलाई सघाएका छन्।
लामो समयदेखि टिमसहित सभापतिमा चुनाव लड्ने बताउँदै आएका नेता सिटौलाले बिहीबार मात्रै सभापति देउवालाई साथ दिने सहमति भएको सार्वजनिक भएको थियो।
उनले उपयुक्त समयमा निर्णय लिने बताउँदै आएका छन्। सिटौलाले सभापति देउवालाई साथ दिने निर्णय गर्नुभन्दा अघि नै थापाले उनको साथ छाडिसकेका थिए। थापाले सिंहसँगै शाक्यलाई साथ दिएर सिटौलालाई पृथक रूपमा नै जवाफ फर्काएपछि सिटौला–थापा सम्बन्धको वास्तविकता छर्लङ्ग भएको कांग्रेसका केन्द्रीय तहका नेताहरूको टिप्पणी छ।
‘सभापति देउवाको समर्थन पाएका रञ्जितलाई नेता सिटौलाको साथ हुनु स्वाभाविक नै हो’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सिंहको समर्थन पाएका शाक्यको पक्षमा उभिएर थापाले नेता सिटौलालाई पृथक रूपमा जवाफ फर्काएका छन्।’
ती नेताले थापाको उपस्थितिलाई रणनीतिक जवाफ भनी अर्थ्याए। सिटौला र थापा फरक–फरक उम्मेदवारको पक्षमा उभिनु र लबिङमा जुट्नुले यसपटक दुई नेताबीच सहकार्य हुने सम्भावना लगभग टरेको छ।